प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा अभूतपूर्व सफलताको नालीबेली, डा. दिव्याले ५ मिनेटभित्र लिएको अहम् निर्णय – Health Post Nepal
२०७६ मंसिर १३ गते १८:४९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो साता अनपेक्षित रूपमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको सामना गरे, जुन भोगिरहेको मिर्गौलासँग सम्बन्धित नभई एपेन्डिसाइटिस र डरलाग्दो संक्रमणको थियो । तर, समस्या जति अनपेक्षित र जटिल थियो, त्यति नै अनपेक्षित र ‘मिर्‍याकल’कै रूपमा उनको स्वास्थ्यमा सुधार आयो । यो उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीले केही मिनेटभित्रै गरेको सही निर्णयबाट मात्र सम्भव भएको हो । केही मिनेटकै बीचमा रोगको सही पहिचान गरी तत्कालै सर्वोत्तम उपचार विधिको छनोट गरी त्यसको उत्कृष्ट कार्यान्वयन गर्नमा चिकित्सकले आफ्नो शतप्रतिशत दक्षता प्रस्तुत गरे, जसको परिणाम आज प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अपेक्षा गरेभन्दा तीव्र गतिमा सुधार भइरहेको छ । यद्यपि, चिकित्सकका अनुसार यो सफलतामा चिकित्सकीय दक्षताले मात्र नभई ओलीको अभूतपूर्व र असामान्य आत्मविश्वासले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
सोमबार राति सारसहुँदो अवस्थामा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीमा मध्यरातबाट सुरु भएको पेटको दुखाइ मंगलबार बिहानी हुँदानहुँदै निकै गम्भीर बनिसकेको थियो । तर, अभूतपूर्व आत्मबल भएका ओलीले दुखाइकै निम्ति आफ्ना निजी चिकित्सकलाई समेत भन्न जरुरी ठानेनन् । ओलीले आत्मबलले दबाउन खोजिरहेको दुखाइ सामान्य थिएन, संक्रमण पेटभरि फैलिसकेको थियो । दुखाइ असह्य भइसक्दा पनि उनी अस्पताल जानु त परको कुरा, आफ्ना निजी चिकित्सकलाई फोन गरेर जानकारी दिनसमेत मानिरहेका थिएनन् । परिवारले चिकित्सकलाई फोन गर्न खोज्दा रातको समयमा दुःख नदिने भन्दै उनी प्यारासिटामोल लिएर दुखाइ दबाएरै बसिरहेका थिए । बिहान निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले आफैँ फोन गर्दासमेत उनले उठाएनन् ।
मिर्गौलाछेउ दुखेको भन्ने खबर पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीनिवास पुगेकी डा. शाहले गम्भीर अवस्थाको आकलन गरी तत्कालै अस्पताल भर्ना हुन भन्दासमेत ओली मानिरहेका थिएनन् । डा. शाहको ढिपी हार्न नसकेर उनी अस्पताल जान तयार भएका थिए । यदि डा. शाहले आफू पुगेको ५–७ मिनेटभित्रै अवस्थाको सही आकलन गरी ओलीलाई अस्पताल भर्ना हुन मनाउन नसकेको भए जुनसुकै अवस्था आउन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि १२ वर्षदेखि इम्युनोसप्रेसन लिइरहेका छन्, जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि हो । इम्युनोसप्रेसन लिइरहेका व्यक्तिमा पेटभरि संक्रमण फैलिसकेको अवस्थालाई मेडिकल साइन्समा जटिलतम अवस्थाका रूपमा लिइने चिकित्सकको भनाइ छ ।
मंगलबार ५–६ घण्टासम्म मिटङ गरेर सारसुहाउँदो अवस्थामा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राति एक्कासि अनुभव भएको दुखाइ, ओलीले सामान्य मानिरहँदा केही घण्टाकै बीचमा जटिलतम बनेको स्वास्थ्यअवस्था, डा. डा. दिव्याले ८ बजे आफैँ फोन तथा मेसेज गर्नु, डा. शाहले आफू पुगेको ५–६ मिनेटभित्रै अवस्थाको सही आकलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल जान राजी बनाउनु, अस्पतालमा चिकित्सक टोलीले केही मिनेटको परीक्षणमै रोग निदान गरी तत्कालै निर्णय लिनु र सर्वोत्तम उपचार विधिको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुलगायत विषयमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले दिएको बयानका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको छ । निजी चिकित्सक डा. शाह, उपचारको नेतृत्वकर्ता डा. रमेशसिंह भण्डारी, डा. अरुण सायमी, डा.सुवास आचार्य लगायतले शुक्रबार पत्रकारसम्मेलन गरी उल्लेखित विषयहरूमा दिएको विस्तृत जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू भन्छन्–
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेटको अप्रेसन भएको तीन दिन पूरा भएको छ । उहाँको स्वास्थ्यअवस्था सुधारउन्मुख रहनुका साथै फिजिकल, बायोकेमिकल मापदण्डहरूमा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ । अहिले उहाँलाई मुखबाट आहार दिन थालिएको छ । श्वासप्रश्वास राम्रो अवस्थामा छ । रगतमा हुने जाँच दिसा–पिसाबको रिपोर्ट अपेक्षा गरेको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । पाचनक्रिया नर्मल अवस्थामा फर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा हाललाई एपेन्डिसाइटिस र मिर्गौलामा बाहेक अन्य समस्या केही छैन । सामान्य अवस्था भन्नुभन्दा पनि शल्यक्रिया गरेपछि घाउ त सबैको हुन्छ । सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक छ । घाउ निको पार्नुपर्छ । घाउ निको हुन अझै केही समय लाग्छ । त्यसपछि मात्र उहाँको अवस्था सामान्य छ भन्न सकिन्छ ।
अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै राम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।
भएको के थियो ? डा. दिव्याले ५ मिनेटभित्र लिएको अहम् निर्णय
सोमबार सिंहदरबारमा ५ घण्टा मिटिङ भयो । राति एकदमै नर्मल खाना खाएर सुत्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार साढे १ बजेदेखि पेट दुख्न थालेको थियो । उहाँले त्यतिवेलाको पेट दुखाइलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको थियो । तर, दुखाइ बढ्दै गयो, सहनै नसक्ने अवस्था आइसकेपछि श्रीमतीलाई साढे ४ बजे भन्नुभयो । यतिवेलासम्म उहाँलाई ज्वरो आएको रहेछ । श्रीमतीले पारासिटामोल दिनुभयो । केही दुखाइ कम भएपछि पुनः सुत्नुभयो । श्रीमतीले डाक्टरलाई फोन गर्न आग्रह गर्नुभयो । यति राति दुःख नदिऊँ भनेर उहाँले गर्न दिनुभएन ।
मंगलबार डा. दिव्याले नै ८ बजे फोन गर्नुभयो । साधारण केही स्वास्थ्य टेस्टको काम थियो । तर, फोन उठेन । दिव्याले म्याजेस गर्नुभयो । पछि जवाफ आयो, मिर्गौलातिर दुखेको छ । नजिकै बस्ने भएकाले डा. दिव्या तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीनिवास पुग्नुभयो । हेर्दा स्वास्थ्यमा केही असर भइरहेको आकलन गर्नुभयो । भर्ना हुन अस्पताल जान आग्रह गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुभएन । अल्ट्रासाउन्डको मानिस बालुवाटारमै बोलाएर हेर्नका लागि भन्नुभयो । डा. दिव्याको जोडबलमा उहाँ अस्पताल जान राजी हुनुभयो । डा. दिव्या पुगेको ५–७ मिनेटमै उहाँलाई अस्पतालका लागि हिँडाइयो । बेडको व्यवस्थापन गरेर, एन्टिबायोटिक चलाएर, अल्ट्रासाउन्ड भएर ४५ मिनेटभित्रै अप्रेसन भयो । यो एकदमै सही निर्णय थियो, जुन आकस्मिक रूपमा लिइएको थियो ।
मिर्गौलारोगका कारण थप जोखिमको अवस्था ?
मिर्गौलाले काम नगर्ने अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस हुँदा नर्मल बिरामीलाई भन्दा बढी जोखिम हुन्छ । तर, एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गरेर पूरा भएपछि भने त्यति फरक पार्दैन ।
अस्पताल कहिलेसम्म ?
प्रधानमन्त्री ओलीको घाउ बिस्तारै निको हुन थालेको छ । सबै चिज साधारण रह्यो, सबै कन्ट्रोल रह्यो र अहिलेको अवस्था रहिरह्यो भने अर्को हप्तासम्म डिस्चार्ज गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
मिर्गौला तथा एपेन्डिसाइटिसको समानान्तर उपचार भएको हो ?
अंगहरूको उपचार भनेको समग्र व्यक्तिको उपचार हो । उपचारको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिलाई नर्मल अवस्थामा पुर्याउने हो । उसले खानपान गर्न तथा हिँडडुल गर्न सकोस् । जतिवेला जुन चिजको उपचार गर्नुपर्छ, त्यतिवेलै डिल गरेर उपचार गरिन्छ । एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन भएर सकिसक्यो । अब त्यसको घाउलाई संक्रमण हुन नदिने र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निको पार्ने हो । बाँकी रहेको उहाँको ब्लड प्रेसरलगायत समस्याको उपचार चलिरहन्छ ।
शतप्रतिशत कन्फिडेन्स लेबल, प्रम ओलीजस्तो आत्मबलको व्यक्ति हामीले देखेको छैन
प्रधानमन्त्रीको कन्फिडेन्सनल लेबल फुल रहेको छ । कन्फिडेन्सले शतप्रतिशत त होइन, उपचारमा ८०–९० प्रतिशतचाहिँ काम गर्छ । उहाँ आत्तिनुभएको छैन । उहाँजस्तो आत्मविश्वास भएको व्यक्ति हामीले देखेका छैनौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा किन छिट्टै जटिल बन्यो एपेन्डिसाइटिस ?
इम्युनोसप्रेसन लिइरहेको बिरामीमा सुरुवाती संकेत नदेखिन सक्छ । जतिवेला देखिन्छ, सिकिस्त भइसकेको हुन्छ, जुन २–४ घन्टाको बीचमा भइसक्छ । इम्युनोसप्रेसन लिएको बिरामीमा कुनै पनि इन्फेक्सन भयो भने २–३ घन्टामा नै संक्रमण फैलिने हुन्छ । राति जुनवेला दुखाइ सुरु भयो, २–४ घन्टामा इन्फेक्सन पेटभरि फैलिएको थियो । एपेन्डिक्स भनेको एउटा अर्गान हो । त्यसमा भएको इन्फेक्सन सबैतिर फैलिनुलाई एपेन्डिक्स फुट्यो भनिन्छ, जुन फुट्न पनि सक्छ, कुहिन पनि सक्छ ।
अस्पताल आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली सिकिस्त भइसक्नुभएको थियो । ठिक समयमा अप्रेसन गरेका कारण सफलता पाइयो । छिटो–छिटो भएका कारणले गर्दा इन्फेक्सन ब्लड तथा पेटमा पनि भयो । अप्रेसन गर्दा रक्तस्राव हुने सम्भावना हुने भएकाले धेरै प्लेटलेट्स चढाइएको हो । प्लेटलेट्सले रक्तस्राव हुनबाट रोक्छ । समस्या नआओस् भनेर प्लेटलेट्स चढाइएको हो ।
डायलाइसिस र पुनः प्रत्यारोपण
प्रधानमन्त्री ओलीमा १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । मिर्गौलाको काममा ह्रास आउन थालेको र संक्रमणले गर्दा डायलाइसिस चाहिएको हो । मिर्गौलाले अलि–अलि काम गरेको छ, जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन । त्यही भएर बीच–बीचमा डायलाइसिस गर्दै आएका छौँ । अहिले जुन अप्रेसन भएको वेलामा हाइपरक्याटावोलिक ट्रिट हुन्छ । बिरामीलाई जसरी पनि स्टेबल राख्नुपर्ने र कुनै पनि समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै चिकित्सकले उपाय अवलम्बन गर्छन् । त्यहीक्रममा बीचमा एकपटक डायलाइसिस गर्यौं । अब उहाँ स्टेबल भएको अवस्था छ । उहाँलाई चाहिएका वेला मात्र गरिन्छ ।
नियमित डायलाइसिस गराउने व्यक्ति पूरा २० वर्षसम्म काम गरेर बाँचेका छन् । प्रत्यारोपणको फाइदा भनेको डायलाइसिस गर्ने झन्झटबाट मुक्ति हुन्छ र शारीरिक स्वास्थ्यअवस्थामा डायलाइसिसभन्दा अझ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले जोड दिएका हौँ । हतारै गरेर प्रत्यारोपण गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । समय अनुकूल पारेर जुनसुकै वेला गर्न सकिन्छ ।